राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर चुनावमा जाऔँ | Ratopati
‘ओली एसियामा मोदीसँग मात्र हार्लान्’
personप्रदीप गिरी exploreकाठमाडौं access_timeचैत ३०, २०७७ chat_bubble_outline0
आज बडो असमन्जसमा म बोल्न उठेको छु । बोलूँ कठिन, नबोलूँ झन् कठिनको अवस्था छ । विगत महिनाहरुमा के कस्ता घटनाहरु भए, ती घटनाले यस संसदलाई समेत कसरी प्रभावित गर्यो, र अब संसदको पुनर्स्थापनापछि के कस्ता कठिनाइ छन् संसदभित्र र संसदबाहिर समेत आइरहेको छ । त्यसमा हामी सबै विज्ञ छौँ । सभामुखको आफ्नै पीडा होला ।
एउटा कुरा म सम्झन्छु, केही महिनाअघि मैले यहाँ एक पटक सरकारको क्रियाकलापको विषयमा कुरा गर्दा इङ्ल्याण्ड इतिहासबाट पैँचो लिएर ‘इनफ इज इनफ, प्रधानमन्त्री महोदय ! इनफ इज इनफ’ भनेको थिएँ । त्यहाँ विद्रोही नेता चर्चिलले उनकै पार्टीका नेतालाई चेतावनी दिए । चेतावनी दिइसकेपछि तत्काल त च्याम्बर्लिनलाई राजीनामा दिएनन् । तर त्यही प्रसिद्ध ऐतिहासिक लर्ड एम्बेरले प्रस्ताव र चर्चिलले समर्थन गरेको प्रस्तावको आधारमा अन्ततः च्याम्बर्लिनको राजीनामा भयो । तर, त्यो सुखद राजीनामा भयो । बेलायतले अर्को नेता पायो ।
मेरो त्यसबेलाको ‘इनफ इज इनफ’ को बडो चोटिलो, गहकिलो र मलाई परास्त गर्ने खालको उत्तर प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको थियो । उत्तर दिन मामिलामा नेपालमा मात्रै होइन मेरो विचारमा एसियामा हारे मोदीसँग हार्नुहुन्छ, अरूसँग त हार्नुहुन्न उहाँ । यस अवस्थामा अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एकछिन अघि शुन्य समयका वक्ताले भन्नुभयो–त्या चुच्चे नक्सा कता हरायो ? त्यो चुच्चे नक्साको भ्रूण हत्या भएको हो ? बालहत्या भएको हो ? या एउटा राजनीति हो ? राष्ट्रिय राजनीति एउटा सानो मोहोरा मात्र थियो ? सतरन्ज खेलको एउटा प्यादा मात्र थियो ?
२०७२ को संविधान त त्यस किसिमको सुखद स्वागतका साथ पनि बनेको छैन । याद राख्नुहोला ठूलो विवादका बीच, विभाजनका बीच, एकातिर दीपावली हुँदै थियो भने अर्कोतिर कालोरात्रि (ब्लाक डे) मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । स्पष्ट छ, नेपाली काँग्रेसले प्रजातन्त्रका माध्यमबाट, अन्य माध्यमबाट दलित, महिला, जनजाति मधेसी, पछि हामीले कर्णाली थप्यौँ । यस संविधानसँग, दलित असन्तुष्ट, जनजाति घोर असन्तुष्ट, मधेस त विद्रोहका लागि लिएका थिए । यस संविधानलाई हामीले सम्हाल्ने कि नसम्हाल्ने ? यसलाई हामीले मलजल गर्ने कि नगर्ने ? मलजल गर्नुको साटो भर्खर रोपिएको बिरुवालाई उखेलेर जरो लागेको छ कि छैन भनेर हेर्ने ? विरुवा लगाउनेले विरुवालाई केही समय धैर्यपूर्वक जलमल गर्नुको साटो विरुवा उखेलेर त्यसको जरा हेर्ने प्रवृत्ति हामीले विगत महिनाहरुमा देख्यौँ । अब जरा हेर्न नखोज्नेले नयाँ दायित्व लिनुपरेको छ । यो संविधानको रक्षा हामी गर्छौं कि गर्दैनौँ ? रक्षा हामी यही रुपमा गर्न सक्छौं कि यथोचित परिमार्जनका साथ गर्छौँ ? त्यो परिमार्जन टालटुले हुन्छ या मुलुकको सबै जाति, जनजाति, पहिचान चित्त बुझाउनु हुन्छ ? यो काम कसैले गर्न सक्दैन । चाहेर पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्नुहुन्न, प्रतिपक्षका नेता र दलले पनि सक्नुहुन्न । संविधानको पहिलो परिभाषा के हो भने संविधान मूलतः सहमतिको दस्तावेज हो । यो मेरा शब्द होइनन्, विश्वका इतिहासमा सबैभन्दा लोकप्रिय रहेको, सबैभन्दा चिरञ्जिवी रहेको अमेरिकन संविधान, सबैभन्दा सानो र चुस्त रहेको सो संविधानमा त्यस संविधानका मस्यौदाकारले लेखे, ‘मेरो चित्त नबुझेका कुरा धेरै छन्, तर मेरा कुरा वर्षेनी बदलिरहेका छन् । कुनै समय राजतन्त्रको सपोर्टर थिएँ । आज विरोधमा छु । कुनै दिन मेरो पनि विचार बदलिएला । आजको सहमतिको आधारमा कुरा गर्छु । राज्य र अधिकारको कुरा गर्छु । राष्ट्रपतिको सापेक्ष अधिकारको कुरामा, यस संविधानमा लेखिएको कुरामा म सहमत छैन’ भनेर संविधानका प्रमुख मस्यौदाकार बेन्जामिन फ्यांकलिन बोलेपछि उनको प्रान्तले सही गर्न मानेको थियो ।
आज सबैभन्दा पहिले यस सदनको माध्यमबाट राष्ट्रिय सहमतिका लागि आह्वान गर्छु । बाहिर सब कुरा आइरहेका छन् । को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने कुरामा, प्रधानमन्त्री मानौँ सडकमा फ्याँकिएको छ । शेरबहादुरजी, महन्थ ठाकुरदेखि प्रचण्डसम्म । वर्तमान प्रधानमन्त्री त चिरञ्जिवी प्रधानमन्त्री भइहाल्नु भयो । प्रश्न सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने होइन । पहिलो प्रश्न जवाफ दिनुस् यो संविधानलाई बचाएर यसैमा हामी टेकेर अगाडि बढ्ने हो अथवा यसलाई २०४७ सालको जस्तै बिजोग गर्ने हो ? अथवा चच्चे नक्साको जस्तै बिजोग बनाउने हो ? दोस्रो कुरा, अब हामीले संविधान लेख्दा कसरी लेख्छौँ ? चुनावको कुरा आएको छ, यसमा कुनै शंका छैन कि चुनाव लोकतन्त्रको अत्यन्तै सार्थक र विश्वस्त कसौटी हो । चुनावमा त जाने तर कसरी जाने ? सबै मिलेर जाऔं यसै सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जान हामी सबै तयार हुन्छौं कि ? कुनै व्यक्ति वा शक्तिले बाहिर बसेर विद्रोह गर्छ कि ? याद राख्नुस् चुनावमा पनि सहमतिमा जाने कुरा हो ।
यो देशका सबैभन्दा बलवान मानिस मैले भनेको सबै कुरा ठीक छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ । यो भन्दा हामी मै देश, मै पार्टी भन्ने अवस्थामा पुग्छौँ । म प्रधानमन्त्रीलाई भन्छु आजको राष्ट्रिय नियतिलाई आफ्नो तजबिजको कुरा नमानी, संसदमा उपस्थित प्रत्येक पार्टी, नागरिक समाजले उठाएका एकपछि अर्को ज्वलन्त सवालहरुलाई सम्बोधन गरिकन नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नुस् । नेपालमा ओलीले साँच्नै नै नयाँ युगको प्रबर्द्धन गरे भन्ने होस् । जालझेल गरेर शकुनीले पासा फ्याँकेजस्तो दाेबारा पासा फ्याँकेर फेरि पाण्डवलाई बनबास पठाएजस्तो फेरि संसद विघटन गर्ने दिशामा नगइदिनुस्, यति प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ ।
(प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रदीप गिरीले गरेकाे सम्बाेधनकाे सम्पादित अंश)